Taariikhda Shabakadda | Suomen Somalia-verkosto
Finland waxay taageedhay iskaashigii horumarinta ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika ee 1980s, welina waxaa lagu xasuustaa Finland guullihii ay ka gaadhay la dagaalankii qaaxada iyo Hay’addii adeegga dhiigga ee ay dhistay Laanqayrta Cas ee Finland.
Finland waxay taageedhay iskaashigii horumarinta ee Somaliya iyo Geeska Afrika ee 1980s, welina waxaa lagu xasuustaa Finland guullihii ay ka gaadhay la dagaalankii qaaxada iyo Hay’addii adeegga dhiigga ee ay dhistay Laanqayrta Cas ee Finland.
Si kastaba ha ahaatee, hawshaas waxaa joojiyay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika ka dhacay 1990s.
Kooxo badan oo magangalyo-doon ah oo Soomaali ah ayaa bilaabay imaanshaha Finland sanaddii 1990s, waxaana kaloo tirada Soomaalida Finland kor u sii qaaday qorshihii qoysaska la isugu keenayay iyo Caruurtii Finland ku dhalatay.
Sanaddii 2016-kii Finland waxaa ku noollaa 19 000 qof oo uu afkooda Hooyo Soomaali yahay Soomaalidii ka kala timid Gobalada kala duwan ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika, ee Finland timid waxay aasaaseen ururo badan oo Finland ka howlgala, kuwaas oo doonaya in ay kor u qaaddaan is-dhexgalka bulshada ee Soomaalida ku nool Finland iyo Finlandeeska iyo waliba ka qaybqaadashada taakulaynta horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya iyo Geeska Afrika.
Ururada fuliya howlaha horumarinta Iskaashiga Caalamiga ah ee ay aasaaseen Soomaalida Finland ayaa si aad ah u rajaynaya in ay caawiyaan dalkoodii hooyo, laakiin waxay caqabado kala kulmaan aqoonta oo aan ku filnayn iyo awooddooda dhaqaale oo yar.
Sanadkii 2004, tusaale ahaan, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Finland waxaa laga dalbaday illaa 30 Mashruuc oo ku wajahnahaa Soomaaliya iyo Geeska Afrika, laakiin waxaa ku guulaystay dalabkii oo dalabkoodii loo ogalaaday 5 Mashruuc oo kaliya.
Wakiilka Soomaaliya iyo Geeska Afrika ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) Dr. Ibrahim Betelmal, ayaa Finland soo booqday xilligii dayrta 2003. Booqashada Dr. Ibrahim waxay bud-dhig u ahayd in la aasaaso dalladda Suomen Somalia-verkosto (Shabakadda Soomaalida Finland).
Betelmal ayaa sheeggay in aad lowgu baahanyahay caawimaad Soomaaliya iyo Geeska Afrika la gaarsiiyo isla markaana ku dhiirigaliyay Soomaalida Finland in ay dalkii ku noqdaan oo dib u dhiska dalka ka qayb qaataan.
Fikradda ah aasaasidda Shabakad ay ku midaysanyihiin ururada Finland ee fuliya howlaha iskaashiga Horumarineed ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika, halkaas ayay ka dhalatay.
Waaxda Iskaashiga Caalamiga ah u qaabilsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Finland iyo KEPA (Xarunta Adeegga howlaha Horumarinta Caalamiga) KEPA (the Service Centre for Development Cooperation), labaduba waxay si aad ah u taageerreen fikirkii aasaasidda shabakadda.
Moodhallada qaar ka mid ah shabakadda cusub waxaa ka mid ahaa Shabakadda RASMUS ee ka soo horjeeda Midabtakoorka iyo nacaybka iyo shabakadda caalamiga ah ee SACB ee isku duwda hawlaha gargaarka ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika ee Nairobi. 11-ka September 2004 ayaa si aan rasmi ahayn loo aasaasay Shabakadda Somalida Finland (Suomen Somalia-verkosto).
Intii u dhaxaysay 2005 iyo 2010 waxaa shabakadda howlaheeda shaqo Kharashaadka ku baxa bixinayay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Finland iyadoo howshaas Fullinteeda iyo Maamulideeda loo xilsaaray Ururka Solidaarisuussäätiö (International Solidarity Foundation).
Ururka Solidaarisuussäätiö (International Solidarity Foundation). waa urur Mashaariic farabadan oo ay wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Finland Maal galisay ka soo fulinayay Soomaaliland tan iyo sanaddii 1999-kii, isla markaana waa urur khibrad u leh arrimaha la xiriira Mashaariicda Horumarineed ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika laga fuliyo
Ujeedada shabakada tan iyo bilowgii ayaa ahaa in la kordhiyo tirada mashaariicda iskaashiga horumarinta Soomaaliya iyo Geeska Afrika oo wax ku ool ah.
Ujeedada kale ee Shabakadda ayaa ahaa in la hagaajiyo kartida iyo xirfadaha ururada xubnaha ka ah Shabakadda ee fuliya Mashaariicda iskaashiga horumarinta, iyadoo ay Shabakaddu siinayso ururada xubnaha ka ah adeegyo talo bixinneed iyo adeegyo waxbarasho.
Shabakad sidan oo kale u dhisan oo ka howl gasha Yurub oo ku mashquusha mashaariicda Horumarineed ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika waxay gooni u tahay oo kaliya Shabakadda Soomaalida Finland.
Wajiga cusub ee shabakadda Soomaalida Finland (Suomen Somalia-verkosto ry) wuxuu bilowday markii shabakadda la diiwaan gashay 29-ka May 2009-kii markaas oo la bilaabay in dib u habayn lagu sameeyo hawlihii Shabakadda oo hadda ka dib u hawl galaysa sidii urur Madax banaan.
Agaasimaha Fulinta ee ugu horreeyey Marja Dr. Tiilikainen waxaa Booska agaasime ee Shabakadda loo doortay 1dii February 2010.
Wargeyska Geeska Afrika waa wargeys elektrooni ah oo diirada saara arrimaha horumarinta Soomaaliya, Geeska Afrika, Jabuuti, Ereteriya, Itoobiya, Sudan iyo Koonfurta Sudan. Wargeyska waxaa soo saara Ururka Shabakada Finnishka iyo Soomaalida ee Finland. Maqaalada iyo qoraalada kale ee lagu daabaca waxay ku saleysan yihiin baaritaan cilmiyeed iyo shaqo si muuqato loo qabtay. Wargeyska Geeska Afrika waa saddex luqadle (Finnish, Iswidish iyo Ingiriis) wuxuuna soo baxaa sanadkii laba jeer.